UNDP Oo Nolol Cusub Ku Soo Rogtay Dalxiiska Tansaaniya
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Guddiga Dalxiiska Afrika » UNDP Oo Nolol Cusub Ku Soo Rogtay Dalxiiska Tansaaniya
Dadaalka dheer ee hawl wadeenka Dalxiiska ee Tansaaniya si uu dib ugu soo ceshado warshadaha dalxiiska ee balaayiin doollar ah, ee uu ku jiro masiibada Covid-19, ayaa si aan caadi ahayn u bixisay faa'iidooyin aan caadi ahayn, iyada oo ay uga mahadcelinayaan taageerada Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay (UNDP).
Xilligii ugu sarreysey ee masiibada, Ururka Dalxiiska ee Tansaaniya (TATO) iyada oo kaashanaysa UNDP oo kaashanaysa dawladda, waxay qaadeen tillaabooyin jawaab celin ah oo dhowr ah, oo soo saaray saameyn aad u weyn marka loo eego amarrada dalxiisayaasha qaro weyn iyo buugaag cusub sidaas darteed rinjiyeynta mustaqbal ifaya ee warshadaha.
In kasta oo si naxariis darro ah loo weeraray masiibada, tirakoobkii ugu dambeeyay ee rasmiga ah ee ka soo baxay Statehouse ayaa muujinaya in warshadaha dalxiisku ay diiwaangeliyeen ku dhawaad ​​​​126 boqolkiiba kobac marka loo eego tirada booqdayaasha 2021 marka la barbar dhigo 2020.
Farriinteeda ku aaddan sagootinta sanadka cusub ee 2021 iyo soo dhaweynta sanadka cusub ee 2022, madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu Hassan waxay ku sheegtay in 1.4 milyan oo dalxiisayaal ah ay booqdeen qaranka hodanka ku ah kheyraadka dabiiciga sanadka 2021 iyadoo uu jiro masiibada Covid-19; marka la barbar dhigo 620,867 fasax-qaate sanadka 2020.
"Tani waxa ay ina tusinaysaa in sanadka 2021, ay kordheen 779,133 dalxiisayaal ah oo soo booqday Tansaaniya," ayay madaxweyne Suluhu ku tidhi ciwaankeeda oo ay si toos ah u tebisay telefishanka dawladda ee Tansaaniya, iyada oo raacisay: 2022 iyo wixii ka dambeeya,”
"Xogtu waxay ka hadlaysaa saamaynta togan ee UNDP ee TATO ee ay taageerto iyo hindisayaasha Dawladdu waxay ku yeesheen warshadaha dalxiiska," ayuu yidhi maamulaha TATO, Mr. Sirili Akko, isagoo raaciyay: "Waxaan rumaysanahay in tani ay tahay bilawga safarkayaga dib-u-dhiska. ka wanaagsan warshado dalxiis oo loo dhan yahay, adkeysi leh, oo barwaaqo ah”.
Mr. Akko ayaa si weyn ugu mahad celiyay UNDP, isagoo sheegay in taageeradoodu ay ku soo beegantay xilligii ugu madoobaa ee dalxiiska ee taariikhdii dhoweyd oo ay u dheertahay saameynta xun ee cudurka Covid-19.
Furaha ka mid ah hindisayaasha TATO ee hoos yimaada taageerada UNDP ee 2021 waxay ahayd inay abaabusho Safarka Wakiilada Safarka FAM ee Tansaaniya Sebtembar 2021 si ay u sahamiyaan wareegga dalxiiska woqooyi ee istiraatiijiyadeed si ay u siiso bidhaamidda dareenka dalxiiska ee hibada leh.
TATO waxa kale oo ay horumarisay kaabayaasha caafimaadka aasaasiga ah ee goobaha dalxiiska ee muhiimka ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin in afar ambalaas ay dhulka yaalliin, iyo heshiis ay la gashay cusbitaalada qaar si ay u isticmaalaan tas-hiilaadka adeegyada dalxiisayaasha haddii ay dhacdo xaalad kasta, iyo isku xidhka dhakhaatiirta duuleysa. adeegyada iyada oo isku dayaysa in ay soo celiso kalsoonida dalxiisayaasha.
Si sax ah loo sheego, TATO oo hoos timaada UNDP waxay geysay diyaarad ambalaas ah oo casri ah meelaha dalxiiska loo tago, kuwaas oo ah Serengeti iyo Kilimanjaro seerayaasha qaranka, deegaanka Tarangire-Manyara, iyo Aagga Ilaalinta ee Ngorongoro.
Iyada oo loo marayo lacagaha UNDP, TATO waxay sidoo kale iibsatay Qalabka Ilaalinta Shaqsiyeed ee aadka loogu baahnaa (PPE) si looga ilaaliyo dalxiisayaasha iyo kuwa u adeega cudurka COVID-19.
TATO iyadoo la kaashaneysa dowladda waxay hormuud ka noqotay faafinta xarumaha Seronera, Kogatende, iyo Ndutu Coronavirus ee xarumaha aruurinta muunada ee bartamaha, waqooyiga, iyo bari-koonfurta Serengeti, siday u kala horreeyaan, taasoo ka dhigaysa tijaabada Covid-19 mid sahlan oo ku habboon dalxiisayaasha.
TATO sidoo kale waxay ahayd ururkii ugu horreeyay ee xarun tallaal ka samaysta xarunteeda si ay shaqaalaheeda safka hore u helaan jabsaska, sidaas awgeedna ay fududaysay dhibaatada safafka ah ee cusbitaallada dadweynaha.
Ururku waxa uu la kaashaday Shirkad Suuqgeynta Dejinta ee Cornersun oo fadhigeedu yahay Maraykanka si kor loogu qaado Tansaaniya oo dhan Waqooyiga Ameerika iyada oo isku dayaysa in ay soo noolayso warshadaha dalxiiska, dhiirigeliso ganacsiyada kale, soo kabsato kumanaan shaqo oo luntay oo ay dakhli u soo saarto dhaqaalaha.
Dadaaladii TATO ee heerkii ugu sarreeyay ee COVID-19 masiibada markii dunidoo dhan ay istaagtay waxay la mid ahaayeen waqti lumis iyo agab kale oo shakiga kitaabiga ah badankiisa Thomases.
Laakin dadaallada ayaa sida muuqata si wanaagsan loogu daah-furay socdaalayaasha caalamiga ah, haddii bayaanka Ururka Socdaalka iyo Dalxiiska Afrika (ATTA) ay tahay wax la qabto.
"Xubnahayada iyo macaamiishooda u safraya Tansaaniya waxay si wanaagsan u heleen xarumaha baaritaanka Covid-19 ee Serengeti," ayuu u qoray madaxa ATTA, Mr. Chris Mears, dhiggiisa TATO, Mr. Sirili Akko.
ATTA waa urur ganacsi oo ay xubin ka tahay oo kor u qaada dalxiiska Afrika isaga oo ka kala yimid dacallada adduunka. Loo aqoonsaday inuu yahay codka dalxiiska Afrika, ATTA waxay u adeegtaa oo taageertaa ganacsiyada Afrika, iyadoo matalaysa iibsadayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha wax-soo-saarka dalxiiska ee 21 waddan oo Afrikaan ah.
Mr Mears wuxuu sheegay in xarunta tijaabada ee Serengeti ay aad u cajabisay xubnihiisa iyo dalxiisayaasheeda, maadaama ay u ogolaatay dadka safarka ah inay kordhiyaan waqtiga ay ku jiraan jardiinooyinka ayna ka hor istaagtay inay u isticmaalaan maalmahoodii safariga ee mudada dheer loo qorsheeyay ee tijaabooyinka Covid-19.
Dib ugu noqoshada guriga, hawl wadeenada dalxiiska ee muhiimka ah waxay xaqiijiyeen in hindisayaasha TATO ay si dhab ah u bilaabeen dhiirigelinta ballan-qaadyo cusub.
"Waxa aanu diiwaan gelinayna dalxiisayaal badan oo cusub, anagoo tixraacayna xarunta ururinta muunada Covid-19 ee Serengeti iyo tallaalka, iyo kuwo kale, oo ah arrimaha ka dambeeya xiisaha ay u qabaan qoritaanka safarada," ayay tiri Safaris mas'uul ka ah Nature. Agaasimaha Maamulka, Ms. Fransica Masika, oo sharraxaysa:
“Aad ayaan ugu mahadcelineynaa, runtii, dadaalka dheer ee ay wadaan ururka TATO oo ay weheliyaan dawladda iyada oo loo marayo taageerada dhaqaale ee UNDP. Waxaan u mahadcelineynaa tillaabooyinka degdegga ah ee ay ku taageerayaan soo kabashada warshadaha ee dhibaatada Covid-19."
Xilligii ugu madoobaa ee saameynta Covid-19 ay xukunka ku haysay, oo ay ka muuqatay xiritaanno waaweyn oo caalami ah oo xuduudaha, baarkinka diyaaradaha, shaqo ka joojinta, iyo curyaaminta dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ee ka mid ah tillaabooyinka kale ee kantaroolka ah ee waddan kastaa uu qaadayo, Tansaaniya lagama dhaafin.
Sababo la xiriira dabeecadda soo galitaanka ee ganacsiga dalxiiska, warshadaha ayaa ahaa kuwa ugu dhibka badan maadaama uu dillaacay Coronavirus wuxuu horseeday hoos u dhac weyn oo ku yimid dalxiisayaasha imaan jiray Tansaaniya marka loo eego in ka yar 1.5 milyan oo dalxiisayaal ah sanadka 2019 ilaa 620,867 sanadka 2020.
Hoos u dhaca soo galootiga ayaa kiciyay hoos u dhac aad u xun oo dakhli ururin ah ilaa $1.7 bilyan sanadka 2020, oo hoos uga soo dhacay rikoorka abid jiray ee $2.6 bilyan sanadka 2019.
Iyada oo boqolkiiba 81 uu hoos u dhac ku yimid dalxiiska sababo la xidhiidha masiibada Covid-19, ganacsiyo badan ayaa burburay taas oo keentay khasaare weyn oo dakhli, luminta saddex meelood meel ahaan shaqooyinkii warshadaha, ha ahaadeen hawl-wadeenada dalxiiska, hudheelada, hagayaasha dalxiiska, gaadiidlayda, alaab-qeybiyeyaasha cuntada. , iyo ganacsatada.
Tansaaniya waa mid ka mid ah meelaha muhiimka ah ee loo dalxiis tago ee soo jiita ku dhawaad ​​1.5 milyan oo dalxiisayaal ah kuwaas oo ka taga $2.6 bilyan sanadkii, taas oo ay ugu wacan tahay lamadegaanka cajiibka ah, muuqaalka dabiiciga ah ee cajiibka ah, dadka saaxiibada ah oo ay weheliso amniga iyo amniga.
Maaddaama waaxda dalxiisku si tartiib tartiib ah ugu gudubto habka soo kabashada adduunka intiisa kale, warbixintii ugu dambeysay ee Bangiga Adduunka ayaa ku boorinaysa mas'uuliyiinta inay eegaan adkaysigooda mustaqbalka iyagoo wax ka qabanaya caqabadaha muddada dheer socday ee gacan ka geysan kara in Tansaaniya loo dhigo hannaan korriin sare oo loo dhan yahay.
Meelaha diiradda la saarayo waxaa ka mid ah qorsheynta iyo maareynta goobta, wax soo saarka iyo kala duwanaanshaha suuqa, silsilado qiimo badan oo deegaanka ah oo loo dhan yahay, ganacsiga iyo jawiga maalgashiga oo hagaagay, moodooyinka ganacsi ee cusub ee maalgashiga kuwaas oo ku dhisan iskaashi iyo abuurista qiimaha la wadaago.
Dalxiiska ayaa Tansaaniya siiya awoodda mustaqbalka fog si ay u abuurto shaqooyin wanaagsan, abuurto dakhli qalaad, bixinta dakhli si ay u taageerto ilaalinta iyo dayactirka dhaxalka dabiiciga ah iyo dhaqanka, iyo ballaarinta saldhigga cashuuraha si ay u maalgeliso kharashyada horumarinta iyo dadaallada dhimista faqriga.
Warbixintii u dambeysay ee Bangiga Adduunka ee Tansaaniya, Beddelka Dalxiiska: Dhinaca Waara, Adayga, iyo Waax loo wada dhan yahay ayaa iftiimisay dalxiiska oo udub dhexaad u ah dhaqaalaha dalka, hab-nololeedyada, iyo dhimista faqriga, gaar ahaan haweenka, kuwaas oo ka kooban 72 boqolkiiba dhammaan shaqaalaha dalxiiska. qayb-hoosaad.
Africa Bank Company Covid-19 Dowladda Suuq- Nature Serengeti Tansaaniya Dalxiiska Baanka Adduunka
Muusiga Rumba ee Congo waxa uu galaa Liiska Dhaxalka UNESCO
Bandhiga Koh Samui Jazz Oo Ku Dhawaaqay Barnaamij Xiiso Leh
Cilmi-baadhis cusub oo ku saabsan daawaynta kansarka ganaca
Gargaar weyn oo loogu talagalay Hawl-wadeennada Dalxiiska Hindiya ee ka bixitaanka...
Daawaynta Safka Koowaad ee Unug Yaryar
Khubarada caafimaadka bulshada ayaa ka digaya: Baahida degdega ah ee loo baahan yahay in loo diyaar garoobo...
Amaahda Guryaha Xashiishada wuxuu leeyahay,
Febraayo 1, 2022 at 06: 25
Taasi waxay la macno noqon kartaa qaar ka mid ah isbeddelada loo dejiyay inay horumariyaan nolosha Afrika. Tansaaniya, horumar ku yimid jawiga maalgashiga. Dadaal dheeri ah ayaa loo baahan yahay si loo ilaaliyo nolosha badda iyo noolaha xeebaha.